သကျတနျ့ခြို: February 2013
နော်ဝေးမှာ ဆန္ဒပြတာ နဲ့မတူဘူး သမ္မတကို စော်ကားတာနဲ့တူတယ် ( သိက္ခာမဲ့သော စကားလုံးတွေ သုံးသွားခြင်း )
ဒီနေ့ သတင်းတွေအများကြီးပဲ ပျော်စရာတစ်ခုမှမပါဘူး ၀မ်းနည်းစရာတွေ ကြေကွဲစရာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေချည်းပဲ
၁ ။ သမ္မတကြီးအဖွဲ့ကိုနော်ဝေမှာ ဆန္ဒပြတာ ကို ဘာမှမပြောလိုဘူး ဒါပေမယ့် ပြပုံပြနည်းကို ဘ၀င်မကျဘူး ။ ရွှေပန်းဖြင့်ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတာ . . Liar Thein Sein ဆိုတာဘာသဘောလဲလူတိုင်းသိတယ် ။ လူလိမ်လို့ပြောရအောင် သူပြုပြင်ပြောင်းလဲနေလို့ ကျွန်တော်တို့သိန်း ၄၀ တန်ဖုန်းတွေကနေ အနည်းဆုံးတော့ ၂ သိန်းလောက်အထိ ကိုင်လာနိုင်ကြတယ် ။ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ကားတွေကို မော်ဒယ်မြင့်တွေ စီးလာနိုင်ကြတယ် ။ ဂျာနယ်လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အနည်းငယ်ပဲဖြစ်စေရလာကြတယ် ။ ဒေါ်စုဆိုပြီး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ရဲလာတယ် ။ အရင်ကအဲဒါတွေရှိခဲ့လို့လား ။ ဒါဟာ သူမပြောင်းလို့ဘယ်သူပြောင်းတာလဲ ။ သူ့အခြေအနေနဲ့သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အကောင်းဖက်ကလည်းနည်းနည်းကြည့်စေချင်တယ် ။ လိုချင်တာကိုတောင်းပါ ဒါပေမယ့် စကားလုံးတွေကတော့သိက္ခာမမဲ့စေချင်ဘူး ။ ဒါဟာ သမ္မတကို စော်ကားခြင်းပဲ ဆန္ဒပြတာနဲ့မတူဘူး ။ သမ္မတက ဆန္ဒပြနေတဲ့သူကို လစ်လျှုမပြုဘူး ဆွေးနွေးခိုင်းတယ် သိရတယ် ။ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ဆန္ဒပြစေချင်တယ် ။ ပြည်တွင်းကိုပြန်လာပါ ဒိုးတူဘောင်ဖက်လုပ်ကိုင်ပါ ဆင်းရဲဒုက္ခကို အတူခံစားပြီး ဆန္ဒပြပါ ။ သမ္မတလည်း နှလုံးခုန်စက်လေး ဘက်ထရီအားပြည့်ရဲ့လားမသိ ။
၂ ။ ဒေါ်စုက မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသော တောင်အာဖရိကမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးကို ဂါရ၀ပြုနေပုံကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောဆိုကြတယ် ဒီနေရာမှာ ဒေါ်စုအနေနဲ့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်လို့ ဂါရပြုတာ ဘာမှမထူးဆန်းဘူး အဲဒါကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဒေါ်စုကို သိက္ခာ ချနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ ။ အရိုအသေပေးတာက ရိုသေထိုက်လို့အရိုအသေပေးတာပဲ ။ ဘာလို့ တခြား မဆိုင်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ချင်နေကြတာလဲ ။
၃ ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရဲဆိုတာရှိတယ် ။ ပြည်သူတွေက ပြည့်သူ့အသံ ပြောခွင့်ရှိသလို ရဲကလည်း တားဆီးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် သွေးထွက်သံယို ဖြစ်ရလောက်အောင်အသက်ဆုံးရလောက်အောင်နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲတာတွေကိုရှံ့ချတယ် ။ မြန်မာအချင်းချင်း ပြည်သူတွေ မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်အောင်နှိမ်နှင်းတာကိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး ။ အထင်သေးတယ် ။ ကန့်ကွက်တယ် ။ ဆွေးနွေးညှိနိုင်းခြင်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အခြေအနေတွေမဆိုးအောင်တားဆီးတာကိုလက်ခံတယ် သွေးတော့မထွက်စေနဲ့ ဒါဏ်ရာနဲ့ အသက်အန္တရာယ်တွေကိုတော့ ရန်မရှာစေချင်ဘူး ။ အခုတော့ လယ်သမားတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေလည်း ဒါဏ်ရာတွေနဲ့သွေးတွေနဲ့ ဆေးရုံတွေရောက် ရဲတစ်ယောက်လည်းအသက်ဆုံးရတယ်သတင်းကြား တကယ့်ကို ဆိုးလိုက်တာ ။ ဒီလိုဆိုပြည်သူတွေ တဖြည်းဖြည်းကြောက်လာကြလိမ့်မယ် ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာ တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲအားပေးပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:31 AM7comments:
လူနာတစ်ယောက်က အာခံတွင်းထဲ အရိုးစူးလို့လာတယ်
ကျွန်တော်ကြည့်တယ် မတွေ့ဘူး ငါးရိုးမို့အချိန်တန်ရင် ပျော်ကျလာမှာပါ
အခု ဒီစာရိုက်နေချိန်မှာပဲ လူနာတစ်ယောက်လာပင့်လိုက်လိုက်သွားတယ်
အခု ဒီစာကို ပြန်ရောက်လာလို့ဆက်ရိုက်နေတာပါ
အသက် ၉၀ လောက်ရှိတဲ့အဖွားအိုတစ်ဦး . .ကိုယ်လက်တွေနာလို့တဲ့
မှိန်ပျပျမီးရောင်အခန်းထဲမှာ သေးနံ့တွေက မွှန်ထူလို့နေတယ်
သူ့မြေးတွေသူ့သားသမီးတွေက အခန်းထဲ ၀င်ချင်ပုံမပေါ်ဘူး
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့နေ၀င်ချိန် က ဘာလို့ ဒီလောက်အရုပ်ဆိုးရတာလဲ
ကျွန်တော် ပြောစရာရှိတာပြောပြီးပြန်ထွက်လာမယ်လုပ်တော့ အဖွားက ကျွန်တော့်ပုဆိုးစကိုဆွဲထားတယ်
တစ်ခုခုပြောချင်နေပုံပါပဲ . . အသံကထွက်မလာဘူး ပုဆိုးစလေးကို တင်းနေအောင်ဆွဲဆုပ်ထားတယ်
သူ ကျွန်တော့်ကို မပြန်စေချင်ပါဘူး . . လူနာရှင်တွေက အဆင်းရဲကြီးမဟုတ်ဘူး စားနိုင်သောက်နိုင်နဲ့ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးပါ
ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ် အဲဒီခွေးကြီးကို စီးတီးမတ်က အကောင်းစားခွေးစာတွေကျွေးနေတယ်
အဖွားအိုရဲ့ကျောမှာ ဘတ်ဆိုး လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်ယာနာတွေရှိနေတယ်
ကျွန်တော်က . . အိပ်ယာနာသက်သာအောင် မွှေ့ရာ အိပ်ရာခင်းရှိကြောင်း ၀ယ်ပြီးအဖွားကိုခင်းပေးဖို့ ပြောတယ်
အဖွားအိုရဲ့ ချွေးမ အဒေါ်ကြီးကပြောတယ် . .သူက လှမ့်နေတာပါ မခင်းတော့ပါဘူးဆရာတဲ့ ခင်းလည်း မထူးပါဘူးတဲ့
အဖွားအိုကို တစ်အိမ်လုံးက မကြည်ကြဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ညဖက်တွေအော်နေလို့တဲ့
အဖွားအိုရဲ့မျက်လုံးက မျက်ရည်တွေကျနေတာသူတို့ မမြင်ကြဘူးလားဟင်
သူလား . . အင်းလေ . .အထီးကျန်နေမှာပေါ့ . အထီးကျန်တယ်ဆိုတာအားငယ်တာ . . ခြောက်ခြားတာ
အနားမှာ လူမရှိတဲ့အချိန်မှိန်ပြပြမီးရောင်အောက်က အခန်းငယ်လေးထဲမှာ ထုပ်တန်းတွေအပေါ် ကြွက်တွေပြေးနေတာ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်
အဲဒီကြွက်တွေများ လာကိုက်ရင် . .အဖွားနာနေမှာပဲ
ခြင်ထောင်လည်းမရှိပါဘူး . . . ဘာလို့ ပစ်ထားရတာလဲဟင်ကျွန်တော်ကမ နေနိုင်စွာ စပ်စုကြည့်တယ်
အဖွား ကြီးက ဆိုးတယ် ဆရာတဲ့ . . . ညညဆို အိမ်မှာက သမီးတွေက ရုံးသွားရတယ်လေ အဲဒါအိပ်လို့မရဘူး
အဖွားကြီးအော်နေတော့ အကုန်လုံးအိပ်ရေးပျက်တယ် ကျွန်မတို့လည်း ၀ဋ်ကျွတ်ချင်ပြီဆရာတဲ့ . . .
၀ဋ်တဲ့. . .အဲဒါဝဋ်တဲ့လား . . ကျွန်တော်ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူး . . .
အဖွားကို ထမီမှန်မှန်လဲပေးဖို့ . . ဆီးဝမ်းကို ဂရုစိုက်ဖို့မှာခဲ့တယ် ကျွန်တော်ထွက်မယ်လုပ်တော့ ကျွန်တော့်ကိုအားကိုးတကြီးကြည့်နေတဲ့အဖွားရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာ
မျက်ရည်စတွေ တွဲခိုနေတယ် . . .
ဟုတ်ကဲ့ . .ညဖက်လည်း လာနှိုးနိုင်ပါတယ် အဒေါ် ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေးပါ့မယ် တစ်ခုခုဆို ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပတ်လည်းယူထားပါ ဆက်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်စိတ်တွေလည်းမကောင်းလှဘူး ဆေးခန်းပြန်ရောက်တော့လည်း မကောင်းလှဘူး
ဒီညက ခြင်တွေ နည်းနည်းကိုက်တယ်
ဆေးခန်းရှေ့မှာ ကြွက်ကြီးတစ်ကောင် ဖြတ်ပြေးသွားတယ် . . . .
အဖွားအိမ်ဖက်ကို များသွားနေတာလား ကျွန်တော်လည်းဘာတွေတွေးနေမိပါလိမ့်
မီးကပျက်နေလို့ နေရာတကာမှာ မှောင်မိုက်နေတယ် . .
ကျွန်တော်လား . . မငိုချင်ပါဘူး . . ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ တစ်ခုခုက ဆုပ်ဆွဲထားသလို စို့နေတာတော့အမှန်ပဲ
လည်ပင်းထက်က နားကြပ်ကလေးကို ကျွန်တော်ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်
ဟူး . . . ဘာမှ ဆက်မရေးချင်တော့ပါဘူး ။
Posted by သက်တန့်ချို at 8:45 PM 10 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:37 AM4comments:
တဖျောက်ဖျောက် နဲ့ သေမင်းတံခါးဝဟာ
အိပ်မက်တွေကို ဖျက်ကနဲ သတ်ချလိုက်တယ်
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ . . .အရာရာပြီးဆုံးသွားပါပြီတဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးအလံတွေလွှင့် . . .
ရင်ထဲတော့ တဆစ်ဆစ် နာကျင်နေလိုက်ရတာ
“ နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း ငါတို့စာသင်ကျောင်း ”
မဟောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်ကြီးမှာ ဗုံးဆံတွေ ပျံ့ကျဲ
ခနော်နီခနော်နဲ့ . ယိုင်နဲ့နေဆဲပါလား
အဲဒီ လက်နက်တွေက လူသတ်တယ်
အဲဒီ မိုင်းဗုံးတွေက လူသတ်တယ်
သား . . . ငိုချင်လိုက်တာ မေမေ . . ။
စာ . . . ထဆို နေကြ
“ ကကြီးကလေးငယ် . . ချစ်စဖွယ် ”
အို . . ဘယ်မှာလဲ မေမေ ရယ်
မျက်ရည်နဲ့ ခါးသီးမှု ဘာလို့ ထပ်တူကြရတာလဲ
“ လူ့အခွင့်အရေး ” တွေ ဆုံးရှုံးနေကြ
သား . . မလေးစားနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ မေမေ ။
နတ်ဆိုးရဲ့ ရွတ်ဆိုမှု ဂါထာ တစ်ဝက်အရောက်မှာ
သားတို့ ရှံးနိမ့်ခဲ့ရတာလား မေမေ
ဂျိုးဖြူကလေးတွေ မရှိတော့ ဘူး မေမေရယ်
စစ်ဝိဥာဉ်ရဲ့ ခလုတ်တစ်ချက် အဆွဲမှာ
အားလုံးလဲကျသွားတယ် . . .
တစ် . . နှစ် . . .သုံး
ဘယ်တော့မှ လည်း . .မပြီးဆုံးသေးနိုင်ဘူး
အဲဒီပုစ္ဆာ . .ဆက်မတွက်ပါရစေနဲ့လား
ဒီနေ့ . . . လယ်ရိတ်ရမယ့်အချိန်
မိသားစုတွေတွေ . . . အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲအက်လိုက်ကြ
ဒီဘ၀ကဖြင့် . . . .
အိပ်မက်တွေ တဖျောက်ဖျောက် မြေမြှုပ်ခံလိုက်ရတာပေါ့မေမေ
ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့ကျည်ဆံမှာ စာနာမှုလေးများ ပါမလား
သူ့ ရင်ဘတ်ကိုဖောက်ထွင်း . . သွေးစိမ်းတို့လျှံကျ
ခါး . . ခါး . . .ခါး . . . တယ်မေမေ
“ ၀ုန်း ကနဲ ပေါက်ကွဲသံရဲ့တစ်ဖက်
မနက်ဖြန်တွေပါ . . ပါသွားခဲ့ရပြီ
မျက်ရည်တချို့ . . . သွေးစက်တွေအပေါ် ဖိတ်ကျ
သားတို့ အမြဲ ပဲ နိမ့်ကျနေခဲ့ရ ။
ရှားပါးတဲ့ မိုးရေတစ်စက် ကို ငတ်မွတ်နေတဲ့
ကန္တာရ အိုမှာ . . .
တစ်ခုလပ် မုဆိုးမ တွေနဲ့
သားရူး မိခင် တွေနဲ့
သေမင်းကတော့ ရီနေရှာတယ် မေမေ
“ခလုတ်တစ်ချက်ဆွဲယုံနဲ့ မင်းတို့အသက်တွေ . . ဖျက်ကနဲပါပဲ ” တဲ့
အဖွားအိုရဲ့ မျက်ရည် တွေ သဲသောင်ပြင်ပေါ်ကျ
ကမ္ဘာမကြေတဲ့ မိုးတွေ . . ရွာချလိုက်ကြစမ်းပါ
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ” ကို ကြက်ခြေခတ်
သားဖြင့် ကြောက်လိုက်တာ မေမေ ရယ် . .
ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် အပြိုင် ကျဲတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
၀ိဥာဉ်တို့ အော်ညည်းသံသာ ကမ္ဘာပျက်မတက်
သွေးနဲ့ ဆေးတဲ့ မြေတစ်ကွက်မှာ
သားတို့ . . သေခြင်းကို တတ်သွားခဲ့ပုံများ မေမေရယ် . .
လေမှာ တ၀င့်ဝင့် . . လူသတ်ကုန်းဆီက
တော်လဲသံတွေ . . . Disaster မဟုတ်ဘူး
အဲဒါ . . သေမင်းရဲ့ တောက် ခေါက်သံ
အပြစ်ရှိသူတို့ စိတ်ခွာ ဖျက်ဆီးကြတယ်
ဘယ်တော့မှ . . . ငရဲက မလွတ်ဘူး
ကျည်ဆံ တစ်တောင့်ကို ရောင်းပါ
ပြောင်းခင်းတွေစိုက်ပါလား ငါ့သား . . .
စာနာမှု ရင်ခွင်ဖြူဖြူမှာ သွေးနီနီတွေစီးကျလာတာ
စစ်က သတ်လေ . . .ပြည်သူတွေက သေလေ
ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းသံကို တော့ တိတ်ဆိတ်စွာ ဆိုနေပါရစေ မေမေ
မေမေ ပေးတဲ့ ကျောက်တံတစ်ချောင်းနဲ့
“ စစ် . . ကို . . မုန်း . . .တယ် ”
မြေတွင်းထဲ ထည့် အုပ်
(သက်တန့်ချို ရေးဖွဲ့သည် )
Posted by သက်တန့်ချို at 10:00 AM7comments: